အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြည်သူလူထုသို့ ထုတ်ပြန်ချက်... ~ ဒီမိုဝေယံ
ဒီမိုဝေယံ သို့ ပေးပို့သော တိုင်ကြားစာများ သတင်းများ ကို microsoft word ဖိုင်များဖြင့် ပေးပို့ပေးပါရန် လေးစားစွာတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ပေးပို့လာသော စာများကို အချိန်မှီဖော်ပြပေးနိုင်ရန်ကြိုးစားပါမည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြည်သူလူထုသို့ ထုတ်ပြန်ချက်...
ကျေးဇူးပါ အမေစု.. (Getty Images)
သို့သော်လည်း တဘက်အဖွဲ့အစည်း၏ စိတ်ထိခိုက် စိတ်မကောင်းဖြစ်စေမည့် အပြောအဆို အမူအရာများ လုံးဝ ရှောင်ရှားကြရမည်..။
အမေစုနဲ့ ခွပ်ဒေါင်း ပြည်သူ့အတွက် အခါကောင်း..
Design Ko Pho Htaung
ဤနေရာတွင် မိတ်ဆွေ၏ အီးမေးလ် လိပ်စာအား ဖြည့်ထည့်ထားခဲ့ခြင်းဖြင့် အသစ်တင်သမျှ သတင်းများအား အလိုအလျှောက် ပို့ပေးပါမည်..။ ဦးစွာပထမ အီးမေးလ်လိပ်စာ ထည့်သွင်းပြီး သင့်အီးမေးလ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာပါက Activate ပြန်လုပ်ပါရန်...
ဆက်သွယ် ရေးသား ပေးပို့နိုင်သည်....
ဂျပန်နဲ့ နိုင်ငံတကာမှ ဗေဒင်၊ လက္ခဏာ ဝါသနာရှင်များအတွက် ဗေဒင်၊ လက္ခဏာ ပညာရှင် ဆရာဦးတင်ဦး
ဘလော့ဂ်ဂါများ နည်းပညာ အကူအညီလိုလျှင်..
SEO Service in Myanmar
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝက အစိုးရတပ်နဲ့ AA တပ်အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်၊ နှစ်ဖက်စလုံး အကျအဆုံးရှိ
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် ချိုပြုံး သီဆိုထားသည့် “မေမေ”
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကို အရေးယူဖို့ AI အဖွဲ့က နယူးယောက်မှာ လှုံ့ဆော်
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ဘယ်နိုင်ငံက ပိုလှသလဲ !!! အပိုင်း(၂)
ရှားပါးသော ပဋိပတ္တိသာသနာပြု ဘုရားသားတော် အစစ်အမှန်
Hnin Cherry Store(Myanmar Branch)
နိုင်းနိုင်းစနေ မမေငြိမ်း ဂျာမုန်းဒန်
လုံမလေး ကိုရင်နော် ခင်လေးငယ် ကောင်းကင်ကို
ကလိုစေးထူး ကိုရန်အောင် ဏီအဲY
မသဒ္ဒါ ပျူနိုင်ငံ ပို့စ်အသစ်များ
ငယ်နိုင် မအိန္ဒြာ မကေသွယ်
မဆုမွန် မဗေဒါ ကိုမင်းထက်
Craton ကိုပီတာရဲ့ အတွေးပုံရိပ်များ thithtoolwin
ကြည်ကြည်ရဲ့ ဒိုင်ယာယီ ချစ်ကြည်အေး မြစ်ကျိုးအင်း
အန်တီတင့် အင်ကြင်းသန့် မိုးယံ
အဂါင်္ဟူး၊ Degolar SimpleViews
ကိုဖိုးတရုတ် ဦးဇင်းထာဝရ မြတ်လေးငုံ
BBC VOA RFA
DVB မိုးမခ ဧရာဝတီ
မဇ္ဈိမ ရိုးမ ၃ နေ့သစ်
ယနေ့မြန်မာ ကချင်သတင်းဋ္ဌာန နိရဉ္စရာ
သျှမ်းသံတော်ဆင့် မွန်သတင်းအေဂျင်စီ KIC
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ..
2008 Myanmar Constitution in Burmese and English ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် http://www.mediafire.com/view/?w86kcpmu1aggwbv
အမေ့အိမ် ပညာရေးကော်မတီ ဆက်သွယ်၊ လှူဒါန်းရန် လိပ်စာများ
(၁)အမေ့အိမ် ပညာဒါန စာသင်ကျောင်း
အမှတ်( ၃၅၂) ရန်ကြီးအောင်လမ်း( ရ )ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာ
ကျောင်းတာဝန်ခံ။ ဒေါ်ငြိမ်းတင် (အငြိမ်းစား ဆရာမကြီး)
Tel : C/O 661639
(၂) ပစ်တိုင်းထောင် ပညာဒါနကျောင်း
အမှတ်( ၆၂ရ ) သီတာလမ်း၊ စဉ့်ငူရပ်၊ အောင်ဆန်း၊ အင်းစိန်မြို့ 
ကျောင်းတာဝန်ခံ။ ဦးလှငွေ ၊ ကိုကျော်ဝဏ္က
Tel : C/O 09 4933 6270
ကိုငယ်( ၀၉ ၅၁၆ ၂၀၆၀ )
NLD (BG) သွေးအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ
NLD (BG) သွေးအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ ၏ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများမှာ ပါဝင်လှူဒါန်းလိုလျှင် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာကတော့ အမှတ်-၈၃၉၊ (ခ)။ မြရည်နန္ဒာလမ်း၊ ၁၉-ရပ်ကွက်၊ဒဂုံ-တောင်၊ (ကျန်းမာရေးမှတ်တိုင်) ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၂၅၈၈၅ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၇၀၁၆၅ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၈၀၃၆၁
တလအတွင်း အဖတ်အများဆုံး ပိုစ့်များ.....
စာပေ ဝါသနာရှင်များအတွက်.. ((( Save လုပ်ပြီး သိမ်းထားရမဲ့ စာအုပ်အစုံပါတဲ့ Links )))
စာပေ ဝါသနာရှင်များအတွက်.. ((( Save လုပ်ပြီး သိမ်းထားရမဲ့ စာအုပ်အစုံပါတဲ့ Links ))) စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက် .. အရမ်း ကို Smart...
အမေ့သမီးတွေနဲ့ အတူ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD နဲ့ အတူရှိနေကြမယ် photo credit Eleven Media Group
Reuters သတင်းဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် နှင့် DKBA (ရုပ်သံ)
အောက်က ရုပ်သံဖိုင်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လက မြဝတီမြို့တွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ DKBA နဲ့ နအဖတိုက်ပွဲ RAW VIDEO ဖိုင်ပါ.. Jutta Pflueg မှပြန်လည်မျှ...
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ ၂၅ရက်နေ့ နောက်ဆုံးရ သတင်း၊ ဓာတ်ပုံများ..
ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာနေပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေဘဝ (မင်းဂံတရွာလုံးဆိုင်ရာ ဒုက္ခသည်များ ပင်မစခန်း) ယနေ့ စစ်တွေကို ဘူးသီးေ...
ဂျပန်TBS သတင်းဋ္ဌာန ကထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ (၇)ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့်.. ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ စစ်အစိုးရ အကြောက်ဆုံးလူရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်... .
ဒီနေ့ ဂျပန်မှ နာမည်ကျော် TBS သတင်းဋ္ဌာနမှ ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ ၇ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ စစ်အစိုးရ အကြောက်ဆုံးလူရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချ...
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ် ပို့ဆောင်ခြင်းခံနေရတဲ့ မြန်မာ့ရှားပါး တိရိစ္ဆာန် ကျားသတ္တဝါများ..
ဟူးကောင်းတောင်ကြား ဒေသမှ မြန်မာကျားတစ်ကောင်.. ယခုအချိန်မှာတော့ ကျားကောင်ရေ ၈၀ကျော်သာ ကျန်ရှိပါတော့တယ်.. တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဈေးကောင်းရတဲ့ အတွက...
သစ်တောဦးစီးဋ္ဌာန ခေတ္တညွှန်ချုပ် (ဗိုလ်မှူးကြီးငြိမ်း) ဦးအေးမြင့်မောင် အကြောင်း တစေ့တစောင်း (ပေးစာ)
နအဖလက်ထက် သစ်တောဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းအောင် (၂၀၀၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက တရုတ် ဘုန်းတော်ကြီးများအား သစ်တန်ချိန် ၃၀၀ လှူဒါန်းစဉ် မြင်ကွင်း )...
27th SEA Games: Closing Ceremony Liveနဲ့ အစအဆုံး ပြန်လည် ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ...
27th SEA Games: Closing Ceremony Liveနဲ့ အစအဆုံး ပြန်လည် ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ...။ နိုင်ငံအလိုက်ရရှိတဲ့ ဆုတံဆိပ်ဇယား http://www.youtube.com...
ခေတ်အဆက်ဆက်က ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး သမိုင်းနှင့် အဓမ္မဝါဒီခေတ် အခြေအနေ.....
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ဒဏ္ဍာရီအဆိုအရ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်က တည်ထားခဲ့ပါတယ် လို့ပြောကြပါတယ်။ ဗိသုကာပည...
အန်တီစုတွေ့ခဲ့တဲ့ မြန်မာ-လာအိုဘောလုံးပွဲ (ရေးသားသူ ဖိုးရှုပ်လေး)
ဓာတ်ပုံ ၊ ဒီမိုဝေယံ၊ ဒီမိုကောင်းကင် အန်တီစုတွေ့ခဲ့တဲ့ မြန်မာ-လာအိုဘောလုံးပွဲ (ရေးသားသူ ဖိုးရှုပ်လေး) အန်တီစု တယောက် ကနေ့ သုဝဏ္ဏကွင်း မှကျင်...
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ရုပ်သံနှင့် ရေကာတာ ဆန့်ကျင်ရေး လက်စွဲစာအုပ်
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ရုပ်သံနှင့် ရေကာတာ ဆန့်ကျင်ရေး လက်စွဲစာအုပ် DamFighter'sGuideBurmese
ဆရာတော် ဦးပညာသီဟ (ရွှေည၀ါဆရာတော်) တရားတော်များ...
ဆရာတော် ဦးပညာသီဟ (ရွှေည၀ါဆရာတော်) ဟောကြားတော်မူသောသာသနာတော်ကို စော်ကားသူ တစ်ယောက်၏ နောင်တတရားတော် အသံဖိုင် အပိုင်း(၁) အသံဖိုင် အပိုင်း(၂) အသံဖိုင် အပိုင်း(၃) အသံဖိုင် အပိုင်း(၄) အသံဖိုင် မတရားမလုပ်ကြပါနဲ့ အသံဖိုင် http://www.4shared.com/audio/NGVtFLnp/SWENYAWAR_SAYARTAW.html
ဆရာကြီးဦးအောင်သင်းရဲ့ ဟောပြောပွဲ အသံဖိုင်များ
ဆရာအောင်သင်းရဲ့ မကွေးဟောပြောပွဲအသံဖိုင်.... ဆရာအောင်သင်းရဲ့ ပျော်ဘွယ် ဟောပြောပွဲအသံဖိုင်.... ဆရာအောင်သင်းရဲ့ လူငယ်နဲ့အမွေ လူငယ်နဲ့ အချစ်အသံဖိုင်.... လက်ခံလိုက်စမ်းပါ အသံဖိုင်...
သတင်းစာဆရာကြီးဘဘဦးဝင်းတင်ရဲ့ ‘ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ’ စာအုပ် Download ရယူရန်.....
Download လုပ်ချင်ရင်... Click
ညီညွတ်ခြင်း အားဖြင့် အာဏာရှင်စနစ် ဖြုတ်ချ ကြပါစို့။..။
စိတ်ညစ်စရာတွေ ပြေပျောက်အောင် နားထောင်ကြည့်ပါဦး။(၂၀၁၀)မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဘောလုံးပွဲ နှစ်ပြားမတန်သီချင်း။...။ (Download ရယူရန်)
ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁မှ၂၆ ပေါင်းချုပ်
ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁မှ၂၆ ပေါင်းချုပ် ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁-၂၆ ဖတ်ချင်ရင် (Downloadရယူရန်။)
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေမှုးချုပ် ဦးသန့်..
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓာတ်ပုံများ
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓာတ်ပုံများ စုစည်းရာ။(LINK)
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှု သမိုင်း။..။
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှု သမိုင်း။..။ (Download ရယူရန် )
စာအုပ်ပေါင်း (၄၀၀)ကျော်ရှိသည့် ဗမာ့ကြယ် ကွန်ယက်စာအုပ်စင် – စာအုပ်စာရင်း...
(ဗမာ့ကြယ် ကွန်ယက်စာအုပ်စင် – စာအုပ်စာရင်း...)
ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် ဆောင်းပါးများ (92)
နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား (25)
ယနေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မေလ၂ရက်နေ့မှာ လွှတ်တေ...
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ် ရောက်ရှိလာတဲ့ ကုလသမ...
နားကြပါတော့... (ပေးစာ ကဏ္ဍ)
၂၀၁၀ခုနှစ်က နိုဝင်ဘာလက မြစ်ဆုံ၊ ချီဖွေ ဒေသများသို့...
ဒီမိုဝေယံမှ ဖျက်သိမ်းထားခဲ့သော သတင်းအား ပြန်လည်ဖော...
ဧပြီလ(၂၄)ရက်နေ့က ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးထံမှာ ဒုလ္လဘရဟန်း...
အမရပူရမှ အသက် ၁၂၀ကျော်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အဖွား ဒေါ်မြကြည်အ...
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ခေတ္တကြွရောက် သီတင်းသုံး နေတော်မူသ...
လွှတ်တော်မလိုသော ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမှု စာသားပြောင်းလည...
လွမ်းခန်းတွေ ရောက်ရင် လူကြမ်းတွေ မျက်ရည်ဝဲမယ်....
ဆရာ မောင်ဝံသ မပြောခဲ့တဲ့စကားအား DVB ရုပ်သံက ကြေညာသ...
၀ါးခယ်မမြို့နယ် ရွှေလောင်းတိုက်မြို့ မီးလောင်မှု၌ အရ...
NLD (BG) သွေးအညီပေးရေးမှ အလှူရှင်များအား ကျေးဇူးတင...
ချင်းပြည်နယ် မင်းတပ်မှ ပရဟိတစိတ် ခေါင်းပါးတဲ့ ဆေးရ...
တံခါးပိတ်ပြီး လက်ယပ်ခေါ်နေသော လွှတ်တော် (ဆောင်းပါးရှ...
မအေးယုအောင် မိခင်ထံပြန်ရောက်၊ ခြိမ်းခြောက်ခံထားရ.....
မိခင်ဖြစ်သူ မကြူမှ သမီးဖြစ်သူ မီးပူနှင့် အကပ်ခံရြေ...
ပန်းပေးတာ ကျေနပ်မှာလား၊ ဦးထုပ်ဆောင်းပေးတာ ကြည်ဖြူ...
သာဓု .. သာဓု .. သာဓုပါဗျာ.. (သာဓုခေါ်ဆိုထိုက်တဲ့ သာ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကို သပိတ်မမေ...
ရွှေလီ(၁)ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ အသေးစိတ် အစီရင်ခံစာ...
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆောက်လုပ်ပေးတဲ့ ရွှေလီ(၁) ဓာတ်အားပေး...
The Lady (မြန်မာစာတမ်းထိုး စဆုံး) လင့်ခ်..
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ယနေ့ကော့မှူး...
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မင်္ဂလာနှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ....
သင်္ကြန်အတက်နေ့က လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းသူများအဖ...
၁၅ရက်နေ့ညက ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် အဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရ...
မနက်ဖြန်မှာ ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ မော...
ယနေ့ တိုကျိုမြို့မှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်တဲ့ (၂၁)ကြိမ်ြေ...
ရွှေညဝါသင်တန်းနှင့် ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဖွင့်လှစ် သ...
ပန်းတနော် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး ကော်မတီမှ ပန်းတနော်မြ...
ယနေ့ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းမှ မေတ္တာရေစ...
ခွပ်ချိန်တန်ခွပ် … ကချိန်တန်က..
အမေသို့ ဆုပန်ခြင်း (ကဗျာရှင် နေပြည်တော်သား)
အဝေးရောက် မြန်မာပြည်သားများ မြန်မာပြည်တွင်း သတင်းေ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗြိတိန်ဝန်ကြ...
စင်ကာပူ ဆမ်းဘားဝမ်း ဓမ္မဥယျာဉ် သင်္ကြန်ပွဲတော်မှ အားလ...
နာတတ်လိုက်ကြတာ (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)...
မင်္ဂလာဒိုးအနုပညာ အင်အားစု (ဂျပန်)ရဲ့ ၂၀၁၂ခုနှစ် တေး...
မြေကြီးကို (ကလိ)ထိုးရုံမျှနှင့် စိုက်နိုင်သောသစ်ပင...
ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီး တရားဓမ္မများ ဟောကြားရန် ထိုင်းနို...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယက ဘဘဦးတင်ဦး တက်...
၂၀၀၉ခုနှစ်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ရွှေလီ(၁)ဓာတ်အားပေး စက်...
ကော့မှူးမြို့ ၊ အမေ့အလင်းရောင်(ပညာဒါန) ကျောင်းဆောင...
အဖွဲ့ချုပ် အမည်ခံဖြင့် ရေပက်ခံမဏ္ဍပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း၊...
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း တရုတ်CPI ကုမ္ပဏီရဲ့ ၂၀၁၁ ၉လပိုင...
ဗန္ဓုလခရီးသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်လိုင်းဖြစ်သော အ...
(၇)ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအဖဲ...
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာလက လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း လက်မှတ...
ဓားသွားပေါ်မှပျားရည်စက် ၊ တဒင်္ဂခဏ လွတ်လပ်ခြင်းနှင့် ...
စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ညောင်ပင်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု နှုံး...
မဲပြားများပေါ်တွင် ဖယောင်းသုတ်သည့်ကိစ္စ မော်လမြိုင် ...
ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (DVB)ရုပ်သံမှ ပထမဦးဆုံး တ...
တရုတ်ကဆောက်လုပ်ပေးပြီး ၂၀၀၉ခုနှစ်က ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်...
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသို့ ပြည်တွင...
မြစ်ဆုံနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ် စာနှစ်စောင်ဆိုပြီး ကိုမျ...
ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ တရုတ် CPI ကုမ္ပဏီမှ...
မော်လမြိုင် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့မှ မော်...
ပဲခူးမြို့ ဥဿာမြို့သစ်မှ အိမ်ဖော် ကလေးမလေးအား အိမ...
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မီးရထား ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ မိသာ...
ကမ္ဘာကျော် Time မဂ္ဂဇင်းကြီးရဲ့ ကမ္ဘာ့သြဇာ တိက္ကမကြီးသ...
အမျိုးသားလွှတ်တော် အတွက် လားရှိုးမဲဆန္ဒနယ်မှ ရှမ်းအမ...
ဟင်္သာတ (ဗကသ)အဖွဲ့ဝင် ကျောင်းသား/သူ (၆)ဦးအား ပါမောက...
လားရှိုးမဲဆန္ဒနယ်မှ ခွပ်ဒေါင်းပါတီနဲ့ ကျားဖြူပါတီ ဘ...
ယနေ့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ဖဆပလရပ်ကွက် ပြည်သူမျာ...
ယနေ့ ရွှေဂုံတိုင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ပြည်သူလူထုအား မ...
ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့က ရွှေဂုံတိုင်အဖွဲ့ချုပ် ရုံးရှေ့မှာ ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ၄၃နေရာမှာ အနိုင်ရရှ...
ယှဉ်ပြိုင်ရာ ၄၄ နေရာလုံး NLD နိုင်ပြီဟုဆို....
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေငြ...
ယနေ့ညနေ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့ အောင်ပွဲခံနေတဲ့ ခွပ်ဒေါ...
စစ်ကိုင်း မင်းလမ်းရပ်ကွက်က ထူးခြားတဲ့ မဲအနိုင်အရှု...
လောင်းလုံ မြို့နယ် ပုလဲမြို့နယ်မှာ အဖွဲ့ချုပ်နိုင်...
ရွေးကောက်ပွဲ Update သတင်းများ (၃)
မြိတ်ခရိုင် ကျွန်းစုကျေးရွာ အောင်မြေနင်းနေတဲ့ ခွပ်...
ဥတ္တရ သီရီက ဆန္ဒမဲပေးပြီးတဲ့ မဲဆန္ဒနေရာ(၂)ခု..
ပေးပို့ရရှိလာတဲ့ မြန်အောင်နဲ့ မြိတ်မှ သတင်းများ..
ယနေ့ မနက်(၆)နာရီက မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာ ခွပ်ဒေါင်း...
(အထူးသတင်း) အဖွဲ့ချုပ် အမှတ်အသားနေရာမှာ ဖယောင်းသုတ...
တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် (၂) (ရန်ကုန် မနက် ၈...
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရွေးကောက်ပွဲ Update သတင်း ဆက်...
ပြည်သူကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)..
သုံးခွမြို့နယ်ရဲ့ ကြိုတင်မဲမှာ အဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စား...
ယနေ့ ဝါးသင်္ခရွာမှာ တည်းခိုမယ့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအ...
► 2010 (1299)
► 2009 (660)
Myanmar Web Sharing
Massage in Yangon
Copyright © 2011 ဒီမိုဝေယံ